Mootummaa Itoophiyaa: "Hiidhannoo hiikkachuun dhimma mariif dhiyaatu miti" - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa 'Waa'een hidhannoo hiikkachuu sarara diimaa mariif dhiyaatu miti'
Addi Bilisummaa Oromoo gara biyyaatti kan gale hidhannoo hiikkateeti, ammas kan hafe hiikkachuu qaba jedhan dubbi himaa itti aanaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Kaasaahun Gofee.
"Dhaabichi hidhannoo hiikkachuuf fedha hin qabu yoo ta'e garuu mootummaan nageenya lammilee eegsisuufi sirna heera mootummaa tiksuuf jecha hojii hidhannoo hiikkachiisuu ni hojjeta" jedhan.
Waa'ee waligaltee mootummaa fi ABO namoonni maal jedhu?
Waa'ee Daawud Ibsaa kana beektuu?
Hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa af-gaaffii tibbana miidiyaa Waaltaa waliin taasisan irratti mootummaa waliin hidhannoo hiikkachuu irratti walii hin galle jechuu isaaniin walqabatee ibsa gaazexeessitootaf kennan irratti Obbo Kaasaahun kan kana jedhan.
"Wanti hayyu dureen ABO jedhan ejjennoo dhaabicha osoo hin taane dogoggora jechootaa natti fakkaata" kan jedhan Obbo Kaasahun "yoo dogoggora jechootaa ta'es akka sirratu, yoo ejjennoo dhaabichaa ta'es irra deebi'ani ejjennoo isaanii akka sakatta'an waamicha dhiyeessinaaf" jedhan.
ABO wayita gara biyyaa galu loltoota isaa 1300 hidhannoo hiikkachiisee akka galeefi loltoonni kunneen wayita ammaa jiddu-gala leenjii Aardaayitaa keessatti leenjii fudhataa akka jiranis Obbo Kaasahuun himaniiru.
Loltoonni ABO kunneen wayita ammaa harka mootummaa jiru jedhan Obbo Kaasaahun.
"Mootummaan wayita ABO waliin mari'ate wa'een hidhannoo hiikkachuu kan hin kaaneef waan mariif dhiyaatu waan hin taaneefi" jedhan.
Dhaabichi kara nagaan qabsaa'uuf waliigalee gara biyyaa dhufe kan jedhan Obbo Kaasaahun, "qabsoon karaa nagaa yaadaan malee qawween miti, waa'een hidhannoo hiikkachuu sarara diimaadha, mariif kan dhiyaatu miti" jedhan.
Kanaafis ABO'n irra deebiin ejjennoo isaa sakatta'ee hidhannoo akka hiikkatu mootummaan waamicha dhiyeessaaf jedhan.
Kun ta'uu baannaan garuu "nageenya lammilee eegsisuufi sirna heera mootummaa tiksuuf jecha humni mootummaa Federaalaa hojii hidhannoo hiikkachiisuu ni hojjeta" jedhan.
Mootummaan hojii seera kabachiisuu waan hojjetuuf uummanni rakkoo nagaa na mudata jedhee akka hin yaaddofnes dhaamaniiru Obbo Kaasaahun.
Waliigaltee Mootummaa Itoophiyaa fi ABO: Baqattoonniifi jiraattonni maal jedhu?